Hasina (hery tsy hita maso) - Wikipedia
Ny hasina dia hery tsy hita maso ka ireo andriana, mpanandro, mpisikidy ary ireo zavaboaharin' Andriamanitra toy ny zazavavindrano, kalanoro, vazimba, ireo sampy, sns...izay afaka manova ny fiainan'ny olombelona no heverin'ny ntaolo ho manana azy. Ny loharanon'io hery io dia Andriamanitra Andriananahary sy ny razana.
Araka ny lovantsofina teo amin'ny andriana anefa, ny hasina amin'ny andriana dia avy amin'ny zanak'andriamanitra mihitsy fa tsy toy ireo hasina hita amin'ny zavaboahary hafa. Raha nidina nilalao tety ambony tany ny zanak'Andriamanitra dia tsy tafody tany an-danitra intsony satria voaota fadin'ny olombelona. Koa tonga nitoetra sy notompoin'ny olombelona teto an-tany ilay zanak'andriamanitra. Naka vady sy niteraka tamin'ny olombelona io zanak'andriamanitra io ka tamin'io fiterahana io dia nifindra tamin'ireo taranany ny hasiny ary ireo taranany ireo dia nohajain'ny olombelona fatratra sy notompoiny ary noandrianiny satria manan-kasina, dia ireo taranaka ireo no loharanon'andriana voalohany. Ary izany no ilazan'ny ntaolo fa ny hasina no maha-andriana ny andriana.
Mety ho faty na hihalefy na very ny hasina raha toa ka voaota fady ka io no ataon'ny ntaolo hoe "maty hasina" na "very hasina" na "mitrikasina". Sarotiny amin'ny hasiny ary ny Ntaolo izay nanan-kasina ka mifady zavatra maro sy tsy nivady raha tsy tamin'ny olona manan-kasina toa azy mba tsy ho maty ilay hasin'ny zanak'andriamanitra nifampita ao aminy. Ary amin'ny andro farany mialoha ny taombaovao na vava alahamady amin'ny volana alahamady dia midio amin'ny rano tsy dikain'amboa sy mifamela heloka amin'ny manodidina azy ny ntaolo mba hamerina sy hamelona ary hampitombo indray ny hasina ao aminy. Ary raha mandeha amin'ireny olona na zava-manan-kasina ireny dia hoy ny fiarahabany sy ny firariany: "masina anie ianao".
Manaporofo izany, ireo anaram-bohitra na anaran-javatra misy ny teny hoe "hasina" na "masina" dia saika ireo tanàn'andriana na mifamatotra amin'andriana. Ny lapan'ny mpanjaka Rabiby tany Ambohitsitakatra ao Anjozorobe dia "Fonohasina" no anarany. Ireo mpanjaka kosa rehefa miamboho dia atao hoe "ny masina" no iantsoana ny taolambalony ary ny tendrombohitra anafenana (andevenana) ireny taolambalon'ny mpanjaka ireny no atao hoe "tendrombohitra 12 masina", ary ilay trano kely eo ambonin'ny fasan'ny mpanjaka merina no atao hoe "trano masina" ("trano manara" no iantsoana ny an'ny fasan'andriana tsotra). Ary ny mpanjaka isan'ny telo lehibe taty Imerina dia Andriamasinavalona no anarany. Midika hatrany izany fa ivon'ny fomba fijerin'ny Ntaolo izao tontolo izao ny hasina.
Ara-tantara, ireo vazimba taty Imerina dia efa nino ny hasina satria izany Ramasinamparihy izany dia isan'ireo mpanjaka vazimba ary Ambatomanitrasina, sy Ambohitrankasina dia isan'ireo tanàna tranainy indrindra voalazan'ny lovantsofina fa nitoeran'ireo razan'andriana merina tany akaikin'ny Maroantsetra raha mbola tsy niakatra taty anivon'ny riaka izy ireo.
Ambohidrabiby, iray amin'ireo tendrombohitra 12 masina eto Imerina, ohatra, dia "Hasin'imerina" no anaram-boninahiny satria hono mipetraka amin'Ambohidrabiby, eo amin'ny alahamadintaniny, amin'ilay tanàna atao hoe Fonohasina ny hasin'ny fanjakan'andriana merina.
Niteraka fombafomba maro arak'izany ny fikajiana ny hasina ka nahatonga ny karazan'andriana sasany hanao ny "lova tsy mifindra" toy ny Andriandoriamanjaka ao Fonohasina sy ny Andriantompokoindrindra ao Ambohimalaza. Ireo mpanjaka maro nifandimby aza dia nanome lanja io hasina io tamin'ny anarany toy ny hoe Ramasimparihy, Andriamasinavalona...Toy izany koa, ny zavatra heverina fa masina dia tsy mety raha tsy landy no atafy na amatorana azy ka izany no mahatonga ireo andriana merina hitafy landy ary ny vakan-tsampy dia atohy amin'ny kofehy landy.
Eto ampamaranana, ankehitriny dia saika diso fitenenana ny olona ka milaza hoe "hasin'ny kaominina"..."hasin'ny andrimpanjakana"...nefa ny hasina, averina ihany dia hery tsy hita maso ifandovana ary avy amin'ny zanahary.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasina_(hery_tsy_hita_maso)&oldid=997631"
Voaova farany tamin'ny 6 Oktobra 2020 amin'ny 14:24 ity pejy ity.